Imirikiti ihe omuma ihe omuma anyi juru bu ihe ntinye nke mmadu nke ejiri ihe mara mma. Infographics abughi nani ihe osise mara mma. Ha kwesiri ibu uzo gosiputara na ihe omuma nke apughi nkowa ya site na ederede. Isiokwu ma ọ bụ akụkọ dị n'azụ ihe ngosi ahụ kwesịrị iji nlezianya see ihe osise na-enyere onye na-ekiri ya aka ịghọta ma jigide ozi ị na-enye. Ihe data ga-akwado akụkọ ị na - enye - mee ka onye na - ekiri ya ghọta mmetụta nke nsogbu na / ma ọ bụ azịza ya.
Ihe omuma ahu na agagharia ahia ahia site na uzo di iche iche - dika foto, ihe odide ederede, eserese na eserese, agba, akara, akara ngosi, vidio na ihe omuma - nke na enyere aka igbasa akuko a. Ha na-enyekwa data nkwado!